विश्वमणि पाेखरेल काठमाडौं - मंगलबार, फागुन २५, २०७७
'विभाजन हुन किन नहुने?', भन्ने अन्योल सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समाप्त गरिदिएको छ र उनीहरूलाई विभाजनकै बाटोमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदएको छ।
अब राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकार परिवर्तनका खेलहरू देखा पर्छन्।
विभिन्न विकल्पहरु सामुन्नेमा देखिएका छन्। एउटा ओलीले नै निरन्तरता दिने र अर्को नेपाली कांग्रेस, माओवादी अनि जसपाहरू मिलेर सरकार बनाउने। र, अर्को कुरा ओली र नेपाली कांग्रेस मिलेर मात्रै पनि बन्नसक्ने अवस्था छ। र, नेपालको राजनीतिक परिघटनाहरूलाई हेर्खाखेरीचाहीँ जस्तो ओलीले अहिले खेलेको खेल यहाँको आन्तरिक सेटिङमात्रै हो भने माओवादी, कांग्रेस अनि जसपाहरू मिलेर ओलीलाई बाहिर निकाल्छन्। र, सरकार बनाउँछन्। अहिले बनेको सरकारले विश्वासको मत लियो भने एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन। र, त्यो सरकारले चुनाव गराउने अवस्था रहन्छ।
होइन, यसमा अब आन्तरिक राजनीतिभन्दा बाहिर केही कुरा छ भनेदेखि ओलीकै पक्ष बलियोजस्तो लाग्छ। किनकी, उनलाई हटाउन यो अवस्थामा कसैले पनि सक्दैनन्।
अहिले किन यस्तो भएको छ?
सर्वोच्चले कट्टेलजीको पक्षमा फैसला नगरेको भएपनि खासगरी उनीहरू मिलेर जाने अवस्था पछिल्ला केही दिनदेखि चलिरहेको राजनीतिक अवस्थाहरूले देखाइरहेका थिएनन्। त्यसको पछाडिको कारण के हो भनेदेखि, सैद्धान्तिक मिलन थिएन। किनभने, हामी संघीय प्राणलीमा गइसकेपछि, संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो चरणको स्थानीय निर्चावनमा पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेससँग थिए। कांग्रेससँग हुँदाखेरि त्यत्ति बलियो पोजिसन नरहने उनको अनुमान र एमालेका केही चुनावी विश्लेषकहरूले कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक्लाएक्लै भयो भने पहिलो पार्टी कांग्रेस नै हुन्छ अथवा माओदावीलाई कांग्रेससँगै रहनदियो भने पनि कांग्रेस नै पहिलो हुन्छ भन्ने राजनीतिक भन्दा पनि प्राविधिक मूल्याङ्कन एमाले (ओली) पक्षको थियो।
त्यसैले, त्यो प्राविधिकरुपमा उनीहरू मिलेको थियो। राजनीतिक रुपमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेकै थिएन। राजनीतिक एकीकरणको जलप भएपनि आलोपालो प्रधानमन्त्री पद्धतिको सहमति थियो। जुन कुरा मिडियामा बाहिर पनि आइसकेको थियो। त्यसमा पनि केपी ओलीले विभिन्न खालका झेल गरे। स्थायी कमिटीका बैठकका कुराहरू, विभिन्न अजेन्डाहरूमा झेल भयो। यी सबै कुरा तपसिलमा आएपनि खासगरी सत्ता लिने र सत्ता दिने सवालमा यो कुरा अल्झिएको देखिन्छ। अबको राजनीति भनेको खासगरी विकल्पहरूको राजनीति हो। अब सबै अलग-अलग भए। खासगरी तीन शक्त्ति अहिले सवल देखिए राष्ट्रिय राजनीतिमा। एमाले, कांग्रेस र माओवादी। यी तीनमध्य दुईओटा जता हुन्छन् सरकार उनीहरूकै बन्छ। त्यो सरकार चुनाव गराउँछ।
अब सरकार कसको बन्छ र चुनाव कसले गराउँछ भन्ने कुरा हो। अहिले ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा आफूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला गरे। अब फेरि संवैधानिक अप्ठ्यारो आउनसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ। किनभने, धारा ७६ (१ र २) अनुसार राजनीति अगाडि बढेन भने मात्रै विघटनमा जानसक्ने व्यवस्था छ संविधानमा। बहुमत प्राप्त पार्टी भएन र त्यही अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले सरकार बनायो र तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै मध्यावधिमा जाने भन्ने हो।
अहिलेको अवस्थामा प्राकृतिक रुपमा सरकार बन्न नसके पनि वा सहमतिको सरकार बन्दा पनि विश्वासको मत ल्याउन नसकेको अवस्थामा एकवर्षपछि चुनावमा जाने अवस्था पनि छ। अहिले राजनीतिमा पनि बढी विकल्पहरू देखिएका छन्।
५३ सिट माओवादीसँग छ। १२१ चाहीं एमालेसँग र ६६ जति कांग्रेससँग छ। अनि जसपाहरूमा ४७ को हाराहारीमा आउँछ।
यस्तो अवस्थामा ओलीबाट पनि माधव नेपालहरू धेरै टाढा गइसकेको अवस्था छ। त्यसैले उनीहरूका लागि अहिले एमालेमा त्यतिधेरै स्पेस देखिँदैन।
अब नेकपा एमालेमा केपी ओलीले पेलेरै जान्छन्। किनकी, त्यसका लागि पार्टीमा उनका लागि सहज वातावरण नै हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा एमालेभित्र उनले कसैलाई व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुँदैन।
जसले जतिसुकै भनेपनि जस्तोसुकै विश्लेषण गरेपनि यसले आम जनतामा निराशामात्रै पैदा गर्छ। अन्योलता पैदा गर्छ र आम कार्यकर्तामा यसले निराशा पैदा गर्छ। अहिले त कस्तो भयो भने, सोचेजस्तो काम पनि भइरहेको छैन। अनि अर्कोतिर बनिरहेको एकीकरण पनि भत्कियो। यस्तो अवस्थामा त एमाले भनेको पक्षघात भएर बाँचेको कुनै एउटा मान्छेजस्तो पो हुन्छ त। अब एमालेमा केपी ओली निकै शक्त्तिशाली भए तत्कालका लागि। किनकी, उनलाई छोडेर हिँडेकाहरू लुरुलुरु फर्केर आउनुपर्ने अवस्था पनि देखा परेको छ। त्यस्तै अवस्था प्रचण्डको पार्टीमा पनि देखिने भयो। जस्तो कि ‘बादलहरू’ नै हेरौं। उनीहरू कुनै बेला प्रचण्डसँग पनि त्यस्तै लुरुलुरु आएका थिए।
अब उनीहरू ओलीतिर अर्थात् एमालेतिरै रहने भए पनि मानौं भोलि अविश्वासको प्रस्तावमा भोटिङ भयो। अनि प्रचण्डले ह्वीप जारी गरेर उनीहरूले मानेनन् भने उनीहरूको त सांसदको पद नै जान्छ। त्यसैले पनि अहिले एमालेले बादलहरूलाई कुनै राम्रो पद वा सम्मान दिन चाहे पनि अवस्था त त्यही हुने हो। त्यसकारण पदै जाने रिस्कमा ठीकै हो एक वर्षका लागि हो भनेर पनि हुनसक्छ त्यस्तो। अब जसरी नेकपा एक भएको मानिएको बेला बादलहरूलाई धेरै सहज थियो अब कित्ताकाट भएर आइसकेपछि उनीहरूलाई एमालेमै सजिलो हुन्छ जस्तो त लाग्दैन।
अब सरसर्ती हेर्दा कुनै न कुनै जुनसुकै विकल्पमा सरकार बन्ने अवस्था पनि रहन्छ र यही अवस्थाले फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्था पनि आउनसक्छ।
दक्षिण एसियामा अहिले हेर्ने हो भने नेपालमा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हाबी भएको देखिन्छ। यस्तो किन भयो त? यो किन नेपालमा कम्युनिस्ट रोगजस्तो भएको होला भन्ने कुरा गर्ने हो भने जनमानस र जनचेतनामा जानुपर्छ। अहिले खासगरी नेपाली जनतामा शिक्षा त भयो होला तर जनता अझै पनि शिक्षित हुन सकेका छैनन्। अहिले हेर्ने हो भने चुनाव भएकै पाँच वर्षमै पनि ठूलै उतार चढाव भइसकेको हुन्छ। तर, जनतामा त्यो खालको राजनीतिक चेतना देखिँदैन।
जस्तो कि, गएको चुनावमै हेरौं, प्रचण्ड देउवासँग बसे। अनेक तिकडम गरेर आफ्नी छोरीलाई चुनाव जिताए। जब कि चितवन नेपाली कांग्रेसकै गढ मानिन्थ्यो। माओवादीलाई आफूसँगै राखे वा एमाले र माओवादीलाई छुट्टाछुट्टै चुनाव लडाउन पाए आफूहरूले जित्न पाइन्छ कि भने देउवाको दाउमा कांग्रेसले त्यहाँ त्याग गर्‍यो। तर, त्यो मानेमा देउवा सफल हुन सकेनन्। तर पनि यो कागताली संस्थाका लागि हो, पार्टीका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन्।
हाम्रो भोटिङ प्याटर्न २०१५ सालदेखिकै हेर्ने हो भने कस्तो छ भने तीनजना मान्छे उभिएको छ भने मुलुकभरि त्यसमा एउटा सिङ्गो कांग्रेस हुन्छ र बाँकी अरु हुन्छन्। राजनीतिक र रणनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने ती तीनजना तीनतिर भए भने कांग्रेस ठूलो पार्टी भइहाल्छ र दुईजना एकातिर भए पनि कांग्रेस दोस्रोमा पुगिहाल्छ। जस्तो ०१५ सालमा पनि १०९ मा ७२ सिट थियो तर, पपुलर भोटचाहीँ उसकै थियो। ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कांग्रेसकै भोट थियो। अरु ठूलठूला छुट्टाछुट्टै लडे भने उसले ल्याउनसक्छ नभए सक्दैन। त्यहाँ मुख्यत: बहुमत त कांग्रेस, मधेसवादी अनि राप्रपाहरू छन् तर उनीहरू त्यहाँ नहुने रहेछ। राजनीति अंकगणितजस्तो हुँदैन। त्यो ज्यामितिजस्तो हुन्छ। बहुमत त त्यहाँ बाम दलहरूकै थियो।
यसरी हेर्दा समाजको संचरना खास परिवर्तन भएको छैन। १५ सालदेखि त धेरै ग्याप भयो। तर पनि २०४८ सालसम्म आइपुग्दा दुई ठूला पार्टी छुट्टाछुट्टै लडेपछि उसले जित्यो।
अहिले माओवादी पनि र एमाले पनि हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने पार्टीचाहीँ घायल भएका छन् र अध्यक्षहरू मजवुत भएका छन्। परिस्थिति यस्तो छ। अब यी दुईओटै कुराबाट बचेकोचाहीँ नेपाली कांग्रेस हो। तर, उ चाहीँ मध्यावधि चाहिरहेको छ। अहिले जता पनि हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ।
अहिले म सप्तरीमा छु। यहाँ पनि हरेक स-साना कार्यक्रम तथा स्थानीय तहको कार्यक्रममा पनि चुनावी भाषण गरिरहेका छन् कांग्रेसका नेताहरू। काठमाडौंमा त छ नै। सभापति शेरबहादुर देउवाको रिडिङ नै अहिले चुनावमा जान पाए केही राम्रो पोजिशन आउँछ भन्ने होला। त्यसले के देखाउँछ भने कांग्रेस घोषित वा अघोषित दुवै रुपमा मध्यावधिमा जान चाहेको छ। चुनाव चाहेको देखिन्छ।
अहिले एमालेले अल्पमतकै सरकार बनाउनुपरेको छ। विश्वासको मत लिनुपर्‍यो भने पनि माओवादीले सपोर्ट नगरेको अवस्थामा जसपाले उसलाई समर्थन दिनुपर्‍यो वा कांग्रेसले दिनुपर्‍यो। नत्र त्यो सरकार टिक्दैन। अहिले एमाले ठूलो पार्टी भए पनि अवस्था त त्यस्तो छ।
विश्वासको मत नपाउँदा वित्तिकै अब जनतामा जाउँ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसैले संवैधानिक प्रावधान र कांग्रेसको मनस्थिति अनि पोजिसनका हिसावले अहिलेको सम्भावना मध्यावधि चुनाव नै देखिन्छ।
अर्को भनेको, सरकारको समीकरण हो। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले दुई विकल्प लिनसक्ला जस्तो लाग्छ। पहिलो त, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने। अर्को भनेको, अरुले बनाएको सरकारलाई समर्थन नदिएर चुनावमा धकेल्ने।
अर्को कुरा, ओली जसपाभित्र पनि खेल्न खोजेकै हुन्। त्यो अवस्थामा जसपालाई साथमा लिएर कांग्रेसले सरकार बनाउनसक्छ र आफ्नै नेतृत्वको सरकारसहित चुनावमा जान पनि सक्छ। विश्वासको मत लिनसके आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जान पाइयो। लिन नसेकपनि त्यसपछिको विकल्प भनेको त मध्यावधि नै हो।
तर, अर्को कुरा के हो भने विश्व राजनीतिमा जतिधेरै विकल्पहरू भयो तेस्रोपक्ष उत्ति नै धेरै खेल्ने ठाउँ पाउँछ। अहिले भारतले ओलीलाई नै काँध थाप्ने अवस्था छैन। किनकी, नेपालमाथि उत्तर-दक्षिणतिरको राजनीति नै त्यस्तै छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २५, २०७७